Tag: ideation | Martech Zone
Echiche Echiche: Itinye Rose, Bud, Ihe Ogwu Azụmaahịa
Wednesday, December 12, 2018 Monday, December 17, 2018 Douglas Karr
Izu a abụwo ihe na-akpali akpali dịka mụ na ụfọdụ ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ sitere na Salesforce na ụlọ ọrụ ọzọ na-arụ ọrụ iji hụ otu m ga - esi melite usoro izu maka ndị ahịa ha. Nnukwu ọdịiche dị na ụlọ ọrụ anyị ugbu a bụ na ụlọ ọrụ na-enwekarị mmefu ego na akụrụngwa, oge ụfọdụ nwere ngwa ọrụ, mana anaghị enwekarị usoro iji kpochapụ atụmatụ ogbugbu kwesịrị ekwesị. Otu ngwa nke ha na-aga n'okporo ụzọ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa ọ bụla
Ihe mere eji rụpụta ọrụ mmekọrịta bụ ihe dị mkpa maka ndị otu gị iji nwee ọganiihu
Hightail weputara nsonaazụ nke steeti mbụ nke Njikọ Njikọ Aka. Nnyocha ahụ lekwasịrị anya n'otú ndị ahịa na ndị ọrụ okike si arụkọ ọrụ iji nyefee ugwu nke ọdịnaya mbụ dị mkpa iji mee mkpọsa, nyefee nsonaazụ azụmaahịa ma bawanye ahịa na nnweta. Enweghị akụrụngwa na mmụba na-arịwanye elu na-emebi ihe okike Site na ọdịnaya na-eto eto na ụlọ ọrụ ọ bụla, mkpa maka ọdịnaya pụrụ iche, nke na-akpali akpali, na-enye ihe ọmụma, na nke dị elu bụ oge zuru oke. Nchọgharị algorithms chọrọ
Sayensị Na-etinye Aka, Ngosipụta Ahịa A Na-echefu echefu na Na-emenye Mmasị
Ndị na-ere ahịa maara karịa onye ọ bụla mkpa ọ dị inwe ezigbo nkwukọrịta. N’agba ahia obula, ebum n’uche bu inye ndi na ege gi nti ozi nke ga etinye ha aka, tinye ha n’obi ha ma mee ka ha mee ihe-otu a ka okwesiri igwa obula. Ma ị na-ewu oche maka ndị ahịa gị, na-arịọ maka mmefu ego site n'aka ndị isi nchịkwa, ma ọ bụ na-emepe emepe isi okwu maka nnukwu ọgbakọ, ị kwesịrị
Inwe ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ma na-ama aka. Na mgbọrọgwụ nke ihe niile anyị na-eme maka ndị ahịa anyị, anyị ka hụrụ n'anya na-enyere aka ịkwaga ndị ahịa site na ụdị ntozu azụmaahịa. Ọ na - enyere anyị aka ịrụ ọrụ na ma ndị mbido na ndị ahịa azụmaahịa, na-eto eto na nghọta ha na ntanetị. Ihe m na-aghọtaghị bụ mgbanwe dị a weaa ka anyị, dị ka ụlọ ọrụ, ga-eme iji nọrọ n'ihu ụzọ ma nọgide na-asọmpi na anyị
Usoro Nzọụkwụ 8 na Ahịa Ọdịnaya Na-aga nke Ọma
Monday, June 30, 2014 Sunday, June 29, 2014 Douglas Karr
Vertical Measures mepụtara usoro 8 maka ịmepe usoro ihe ịga nke ọma na-aga nke ọma nke gụnyere mmepe atụmatụ, echiche, okike ọdịnaya, njikarịcha, nkwalite ọdịnaya, nkesa, nurturt na mmụba. Ilele ire ahia nke ahia a dika uzo di iche iche na ndi ahia ahia di oke nkpa n'ihi na o mejuputara ọdịnaya ya na uzo ma obu ebumnuche nke onye obia na ebe nrụọrụ gi ma hu na enwere uzo iji gbanwee. Okike ọdịnaya na ịrị elu. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50%
Vidio a sitere na Spigit, onye kwupụtara njikọta na ndị na-akwado anyị na Mindjet, mee ụfọdụ isi okwu na vidiyo a nke na-ekwesịghị ileghara anya: Innovation = Ideation + Ogbugbu. Echiche site n'aka ha abụghị ihe ọhụrụ, a ghaghị ime ha. Echiche kachasị ewu ewu abụghị echiche kachasị mma maka nsonaazụ azụmaahịa. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ele ụlọ ọrụ na-eme ka ndị ahịa niile nwee nsogbu naanị iji hụ na azụmahịa dara. Mgbe ụfọdụ ihe ndị ahịa na-arịọ adịghị uru ya
Buzzwords nke ahia si Mashable
Ndị otu na Mashable etinyela ihe omuma a na ụbọchị 30 nke Azụmaahịa Buzzwords. Dịka onye na - enweghị ike ikwu okwu na - ekwu okwu, enwere m ekele mgbe niile mgbe anyị na - ele BS ahịa anya. Aga m eme ihe n'eziokwu, ma kweta na echere m na ihe ọmụma a nwere ike jupụta na ya. Okwu dị ka agile marketing, infographic na gamification abụghị ahịa buzzwords, ha bụ okwu n'ezie na onye ahịa ọ bụla kwesịrị ịghọta nke ọma. Ma nke m
Sunday, October 21, 2012 Sunday, October 21, 2012 Douglas Karr
Ruo ọtụtụ narị afọ, nkọwa nke na-arụpụta chọrọ ka e nwee usoro nrụpụta na-ewere ngwaahịa site na akụrụngwa gaa na ngwaahịa maka ahịa. A tụrụ akụ na tọn na eserese na ngwa ahịa. Banyere ego binyere ego dabere na ego ole ị nwere. Usoro mmuta anyi kwadebere ndi ntorobia anyi ka ha gosiputa n’oge, ha abiara ibido oru, ndi oru ahu kewara… acha anụnụ anụnụ aka ha ruru unyi